Umshini Wekhofi Werobhothi, Umshini Wokuthengisa Ikhofi - Moton
I-Moton Technology Co., Ltd. iyibhizinisi lobuchwepheshe elisungula izinto ezintsha, ikakhulukazi eligxile ku-R&D kanye nokukhiqizwa kwemikhiqizo yokuhlanganisa okuzenzakalelayo kwerobhothi emkhakheni wokusetshenziswa. Imikhiqizo yethu efakiwe, imikhiqizo yokuthengisa ehlakaniphile isetshenziswe kabanzi emazweni amaningi futhi yathola ukunconywa okuningi kumakhasimende.
Sinonjiniyela abangu-18 abanama-majors ahlukahlukene esikhungweni sethu se-R&D. Bonke bathweswe iziqu emanyuvesi adumile e-China abaneziqu ze-bachelor kanye ne-master degree futhi banekhono kakhulu emikhakheni yabo yocwaningo. Okwamanje, sinokusebenzisana okuthile kwezobuchwepheshe namanyuvesi adumile e-China.
Isizinda sethu sokukhiqiza sisesifundeni saseSujiatun, eShenyang, esifundazweni saseLiaoning. Indawo yokwakha yesikhungo izungeze i-20,000 sqm.
Siyakwazi ukwenza umklamo owenziwe ngokwezifiso ngokusekelwe ezidingweni zeklayenti. I-OEM ne-ODM zombili zamukelekile kithi. Izidingo zamaklayenti ziyizinkombandlela zokukhiqiza kwethu.
Sihlinzeka ngensizakalo yobungcweti ngemuva kokuthengisa kumakhasimende ethu avela eChina naphesheya kwezilwandle. Isevisi eku-inthanethi inikezwa 7x24h. Uma amaklayenti edinga isevisi yasendaweni, singathumela onjiniyela bethu bensizakalo esizeni ukuze kuxazululwe izinkinga.
I-New Arrival Factory Direct Direct Hot Selling Min yango-2022...
Isitolo Setiye Semfashini Yerobhothi Entsha Yohlelo Lokusebenza Lwasendlini...
Isiteshi Sangaphandle Se-Robot Milk Tea e-Chi...
Kuleli hlobo e-Dalian China, isiteshi sangaphandle setiye sobisi lwe-MOTEA sisetshenziswe ngempumelelo kuMkhosi Wokudla WamaShayina. Amakhulu fr...
I-Hot Sale Product Mini Robot Coffee Ki...
2021 China Shenyang International Robot Show ubanjelwe ngempumelelo eShenyang New World EXPO kusukela ngo-Oct 23 kuya ku-25. Phakathi nezinsuku ezintathu ze-ex...
Ukuthunyelwa kokuqala kwekhofi irobhothi elincane...
Ngemuva kwe-R&D yezinyanga ezimbalwa, umkhiqizo wethu wekhiyoski yekhofi irobhothi elincane usetshenziswe ngempumelelo e-Shenyang International Software Park. Kuyimi...